Sidee loogala soo Baxa Muusikada YouTube-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loogala soo bixi karaa muusikada YouTube-ka?
Waxaa laga yaabaa 9, 2021 0 comments 351
YouTube waa la sii wadaa xoojinta maalin kasta, iyada oo ay ugu wacan tahay noocyadeeda kala duwan ee videos Waxay u muujiyaan waxyaabo qiimo leh isticmaaleyaashaada. Laga soo bilaabo cuntada karinta ee cajiibka ah ilaa talo bixinta xoolaha, shaki la'aan, waxaa jira fursado aan la tirin karin oo ay adeegsadayaasheedu ku baran karaan aqoon cusub raaxada kombuyuutarkooda ku xiran internetka.
Laakiin waxaa jira dad badan oo xiiseynaya inay ka soo degsadaan muusikada Waxaad Tube, iyo markaad rabto inaad duubto hees, fiidiyo ama filim ay isticmaaleyaasheeda qaar u soo gudbiyeen barxadan, waxaad isticmaali kartaa habab dhowr ah oo aad waxtar u leh una fududeyn kara howshan oo dhan.
Ka soo dejiso fiidiyowyada You Tube-ka Computer-ka
Waa muhiim in la isticmaalo codsi lagu soo dejisto fiidiyowyada YouTube-ka kombiyuutarka waana sida saxda ah ikhtiyaarka ka caawinaya sameynta kontaroolada inta lagu jiro hawsha dajinta. download, taas oo siinaysa nabadgelyo badan isticmaalayaasha. Waa inaad nuqul ka sameysataa oo aad ku dhajisaa URL-ka fiidiyowga aad dooratay oo aad ku dhejin kartaa barxadda You Tube
Fiidiyowyada HD, ah qaab guud ahaan waa MP4, marka laga hadlayo fiidiyowyo tayo fiican leh, qaabka ugu isticmaalka badan waa MKV. Barnaamijka kumbuyuutarka kumbuyuutarka ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad u beddesho fiidiyowyada YouTube-ka MP3 iyo MP4, gaar ahaan tan iyo markii ay ka caawiyaan xulashada qaabka iyo tayada soo dejinta.
Soo dejinta muusikada waxaa lagu sameyn karaa iyada oo loo marayo bog gaar ah
Khubarada tiknoolajiyada qaarkood waxay kugula talinayaan isticmaalka VLC Media Player si aad u soo dejiso fiidiyowyada YouTube-ka ee kombuyuutarka. Nidaamka waxaa lagu bilaabay adigoo nuqul ka sameysanaya URL-ka fiidiyowga la doonayo iyo VLC oo furmaya. Furitaanka ka dib, waa inaadclick”Dhexe> Furan, meesha ay ku taal cas. Halka ay ku qoran tahay "gal URL" waa inaad dhajisaa xiriirka fiidiyowga oo aad siisaa "guji" inuu ku ciyaaro.
Markaa waa inaad "gujisaa" Qalabka> macluumaadka koodhka oo aad nuqul ka sameysaa macluumaadka ka muuqda goobta "meesha". Ka dib xiriiriyaha la soo guuriyey ayaa lagu dhajiyay mid kasta browser iyo furaha "gala" ayaa la riixayaa. Waa in la siiyaa "click midig ku yaal fiidiyowga oo xulo "badbaadi sidii". Isla markiiba fiidiyowgu wuxuu bilaabmayaa inuu soo dejiyo qaab MP4 ah.
Faa'iidooyinka Adiga Isticmaalayaasha Tube-ka
Sababtoo ah asalka iyo tayada qaar badan oo ka mid ah fiidiyowyada You Tube, qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala ayaa soo jiitay inay bartaan sida loo soo dejisto muusigooda, taas oo ay rajeynayaan inay ku sameyn karaan bilaash, fududaan, dhakhso iyo khatar la'aan. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka ah tiknoolaji Waxay u baahan tahay xoogaa khibrad ah shaqooyinka ugu waaweyn ee bogagga qaarkoodna waa in si taxaddar leh dib loogu eego.
Maaddaama Adiga Tube ay heli karaan dhammaan isticmaaleyaasha, waxaa jira dad badan oo gala madal iyada oo aan hore loo aqoon dunida xisaabinta, waana sababta ay lagama maarmaanka u tahay in la diyaar ahaado in wax la barto oo la sabro, marka teknolojiyaddu ay isku murgi karto sababo jira awgood
Mar muusikada ee fiidiyowga YouTube-ka ah, isticmaaleyaashu way ku raaxeysan karaan markasta oo ay doonaan. Waa muhiim in la qiimeeyo beddelaadkan ay kuu fidisay You Tube, oo ah bog internet ka noqday kan ugu isticmaalka badan adduunka.
1 Ka soo dejiso fiidiyowyada You Tube-ka Computer-ka
2 Faa'iidooyinka Adiga Isticmaalayaasha Tube-ka
Sidee loogu adeegsadaa YouTube suuqgeynta internetka?
Sidee loo soo degsadaa fiidiyow YouTube ah bilaash?